Nlegharị anya na Nuremberg | Akụkọ Njem
Otu n'ime obodo ndị nwere oke nke ya n'akụkọ ihe mere eme bụ Nuremberg. Echere m na anyị maara ya karịa site na akwụkwọ akụkọ ihe mere eme karịa ebe ndị njem nleta ya, mana n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ ọ bụ obodo ama ama.
Nuremberg bụ na Germany, mara site na Ọnwụnwa Nuremberg mgbe Agha Worldwa nke Abụọ gasịrị, mana ọ bụ ebe na-adọrọ mmasị ma ọ bụrụ na ị na-eche maka ịgagharị Germany. Ka anyị hụ taa otu esi eme njem na Nuremberg.
2 Ihe ị ga-ahụ na Nuremberg
Obodo dị na steeti Bavaria, n’akụkụ Osimiri Pegnitz, ọ dịkwa ezigbo nká. Na-eme ka ya akụkọ ihe mere eme center maa mma na na onye ọ bụla nkuku ume ume akụkọ ihe mere eme. Gburugburu ya bụ ọtụtụ oke ọhịa na ubi a raara nye ọrụ ugbo.
E kewara obodo ochie ahụ na agbata abụọ site n'akụkụ osimiri, agbata San Lorenzo na agbata San Sebaldo. Okporo ya gbagọrọ agbagọ agbago kwupụta na nnukwu ụlọ na ọ bụ ezigbo mma inyocha na ụkwụ, n'etiti ije.
Ihe niile ochie ochie gbara ya gburugburu mgbidi ochie, nkume kilomita ise, yana ọnụ ụzọ ámá na ụlọ elu, anọ na mkpokọta. Kaadi akwukwo ozi dika nke ahu, zuru ezu. Ihe mkpuchi ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke ndị ọbịa na-emeghe, enwere ụlọ osisi iji kpuchie ha na a olulu, sara mbara nke ukwuu, ghọrọ ogige, nke ọ bụ otu n'ime obere moats ndị lanarịrị na Europe.
O doro anya na bọmbụ WWII kpatara nsogbu ha, mana e wughachiri ihe ọ bụla dịka atụmatụ mbụ si dị ka amara dị.
Ihe ị ga-ahụ na Nuremberg
Touristlọ ọrụ ndị njem nleta dị na Cultural Center, Kunstkulturquartier, nke dịdebere ọdụ ụgbọ oloko ahụ, ọ bụ ezie na etiti etiti, Hauptmarkt, enwere obere ọfịs ọzọ. N'ebe abuo ị nwetara Nüremberg + Fürth kaadị » (Fürth bụ aha agbata obi). Kaadị a na-enye gị ohere jiri ụgbọ njem mpaghara maka ụbọchị abụọ ma mepee uzo nke ngosi nka n'obodo abụọ ahụ n'efu.
Buru n'uche na Nuremberg ọ bụ obodo nke abụọ kacha na Bavaria, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu puku afọ nke ịdị adị. Yabụ, ịmalite ije anyị, ọ dịghị ihe dị mma karịa ịme a ochie ije. Na ebe mbụ ịmara bụ Kaisenburg, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na agha center nke obodo na otu n'ime obí eze ka mkpa n’oge ahụ.
N'akwụ ya dabere akụkọ ihe mere eme okpu agha ya na ulo ochie ya nke nwere otutu osisi, imaatu Brelọ Albrecht Dürer, ma ọ bụ Leta Tanner, nke bụ ụdị ụlọ ndị a kachasị. N'akụkụ osimiri ahụ ị ga-ahụkwa Deplọ Wine na ụka ochie nke na-enye aha ha na mpaghara abụọ pụrụ iche nke obodo ochie: Churchka nke St. Sebald na nke San Lauwrence.
La Chọọchị Sebaldus O nwere uzo abuo, odida anyanwu na owuwa anyanwu. N'ebe ọdịda anyanwụ enwere Romanesque na mmalite Gothic naves na ụlọ elu, ọkachasị site na narị afọ XNUMXth. N'ebe ọwụwa anyanwụ, e nwere ụlọ Gothic mbubreyo site na narị afọ nke XNUMX. Nke a narị afọ nke XNUMX senti bụ onye nchebe nke obodo ahụ na e nwere ili ya, nke e mere na 1510 site Peter Vischer Okenye na mmalite Renaissance ịke nwere ụfọdụ ọla kọpa na-egosipụta ihe nkiri site na ndụ ya.
Maka akụkụ ya Chọọchị San LorenzoIhe owuwu ya malitere na narị afọ nke XNUMX mana ọ were ọtụtụ narị afọ ole na ole iji rụchaa ya. Taa ụzọ kachasị ewu ewu bụ Late German Gothic, ma ọ bụ sondergotic. Ọ bụ otu n’ime ụka izizi gbanweere okpukpe Lutheran na 1525. Otu n’ime akụ ya ọ hụrụ n’anya bụ ọmarịcha ụlọikwuu nke Adam Kraft sere.
Ọzọ medieval pearl bụ Isi mmiri Gothic site na narị afọ nke XNUMX, nke emere dika ulo elu nke ulo uka Gothic, nke nwere onu ogugu polychrome 40 na onodu anọ. Ọ mara mma ma ọ dị n'otu njedebe ahịa.
Dabere na Nuremberg ngosi ihe mgbe ochie ọtụtụ n'ime ha na-etinye uche na mpaghara a. Na mgbakwunye, bido n’etiti ụtụtụ rue elekere isii nke ụtụtụ, ihe niile na-aga aga, na-eme ka ọ dịrị ndị na-agagharị mfe ịbịa na ịla. Ọfọn nke Castlọ nke Imperial Ọ bụ ụlọ ngosi ihe nka, sitere na 1040 ma nwee ọtụtụ ọnụ ụlọ mara mma ileta. E nwekwara Ụlọ Nzukọ Alaeze, ụlọ nke narị afọ nke XNUMX, nke nwere ụlọ Gothic mara mma na okpuru ulo nke nwere mkpụrụ ndụ ochie; ma ọ bụ ndị mara mma nke XNUMX na narị afọ Renaissance ụlọ, na fembohaus, nke metụtara akụkọ ihe mere eme nke obodo ahụ.
Mgbe ahụ, e nwekwara Germanic Museum, Museum nke Medieval Executioner's House, Lochgefängise Museum, mbụ ọchịchị obodo, ndị Museumlọ Ọgwụ .lọ Ọgwụ Narị afọ nke XNUMX, na mara Cherslọ ihe nkiri Museum nke Tucherschloss nke ahu gosiputara ndu ndi amara aha ha ...
Nke ahụ gbasara ndụ ochie, mana n'ezie Nuremberg bụ taa amara nke ọma maka ọrụ ya na ama Ọnwụnwa Nuremberg imegide ndị Nazi. N'echiche a, ị nwere ike ịga leta ndị Dokuzentrum na akụkọ ihe mere eme nke ndị otu ọgbakọ omebe iwu na ụbọchị Holocaust na Ememe Ncheta nke Nuremberg na Obí Ikpe Ziri Ezi nke bụ kpọmkwem ụlọ ebe n’agbata 1945 na 1946 a na-eme ọnwụnwa, ọnwụnwa 21 na mkpokọta.
A ga-eme nleta a na Satọde, mgbe enweghị nnọkọ na ọ bụrụ na ị ghọta asụsụ Bekee ị nwere ike were ntuziaka ọdịyo nke na-agwa gị akụkọ ahụ dum. N'ụbọchị izu ụka, ọ nwere ike ịdịkwu mgbagwoju anya n'ihi na ụlọ ahụ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga ije ebe dị omimi na ị nweghị claustrophobia mgbe ahụ ị nwere ike ịga leta ihe na-adọrọ mmasị ụzọ na ruo ọtụtụ narị afọ, ndị bi n'obodo ahụ ewuwo n'okpuru okporo ámá ya. Ha karịrị ụzọ vaults, cellars, na-acha ọbara ọbara biya, ndị kasị ewu ewu na gburugburu ebe a. Yabụ, na mgbakwunye na oge ochie dungeons ị nwere mkpụrụ ndụ ndị a yana kwa bonka a raara nye nka n'okpuru nnukwu ụlọ ya.
Na mgbakwunye, Nuremberg na-enye ndị ọbịa ya ụdị ihe nkiri ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ya Trainlọ ihe nkiri German, na locomotives, ụgbọ okporo ígwè nke Eze Ludwig II ... Dịka ị pụrụ ịhụ, nleta obodo ahụ nwere ike ịmasị. Tinye na nri mpaghara, sausaji, poteto, nri, anụ egwuregwu, obere bekee dị mma ole na ole na ị nwere nnukwu ncheta nke Nuremberg.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Alemania » Njem Nleta nke Nuremberg